Yaa ku soo baxay HOP095, HOP038 iyo HOP069? | KEYDMEDIA ENGLISH
Yaa ku soo baxay HOP095, HOP038 iyo HOP069?
Kursigaan, waxaa hore ugu fadhiyay Cabdikariin Khaliif Cabdi Dhalac, kaas oo sababsaday taageeradii uu la garab taagnaa, Farmaajo, waana farriin gaar ah, oo uu xanbaari doono, xildhibaanka hadda ku fariistay ee Cagaweyene, oo la xisaabtan adag uu sugayo.
KAALKACYO, Soomaaliya – Doorashadii ugu adkeed, tan iyo markii uu billowday hannaanka boobka ah, ayaa caawa ka dhacday magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, kadib baratan adag oo loo galay kursga HOP095.
Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud, ayaa ku guuleystay kursiga, kadib markii uu kaliya 7 cod, kaga adkaaday Maxamed Saciid Faarax, oo inta badan bulshadu la doonayeen kursiga, waxaana Cagaweyne, guusha u sahlay guuldarrada Maxamuud Kudun Xiimaa.
Wareeggii hore, Maxamed Saciid Yare, ayaa helay, 44 cod, Cabdiraxmaan Cagaweyne, ayaa isna helay 35 cod, halka, Maxamuud Kudun, la yimid 22 cod, inta badan cododkii Kudun, ayaa aaday dhanka Cagaweyne, oo sidaas ugu biiraya baarlamaanka 11-aad.
Kursigaan, ayaa ugu danbeeyay saddexda kursi ee beesha Sacad, ku leedahay Golaha Shacabka, kuwaas oo dhamaantood loogu tartamay si daah-furan, waana beesha kaliya ee Qoorqoor, si cad uga diidday inuu shaqsiyaad gaar ah u xiro kuraastooda.
HOP#038, ayuu maanta ku guuleystay Cabdisalaan Xaaji Axmed Liibaan [Dhabancad], kadib tartan uu la galay saddex musharrax, halka, ay HOP#060, baratan xiiso gaar ah lahaa ku soo qaadatay Qaali Cali Shire oo oo cashir u dhigtay, Ubax Tahliil Warsame.
Warar hoose, waxa ay sheegayaan in Cagaweyne, ku dhow yahay kooxda Farmaajo, hayeeshee, waxaa baraha bulshada qabsaday hambalyo ay u dirayaan xubno caan ah oo ka tirsan xisbiga uu hoggaamiyo Xasan Sheekh, taas oo keentay in mar iyaga lala xariiriyo.
Dhanka kale, Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen (Odowaa) ayaa maanta ku guuleysatay kursiga tirsigiisu yahay HOP#069 ee golaha shacabka BJFS, kadib markii uu xalay tanaasulay Cabdiraxmaan Al-Cadaala oo ahaa tartame olole adag ku jiray.